Raul oo ka jawaabay eedeyn uga timid taageerayaasha Real Madrid – Gool FM
Raul oo ka jawaabay eedeyn uga timid taageerayaasha Real Madrid
Liibaan Fantastic March 27, 2017
(Madrid) 27 Maarso 2017 Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Raul Gonzalez ayaa ka jawaabay eedeyn uga timid taageerayaasha kooxdiisa.
39 jirkaan ayaa lagu soo eedeeyay inuu uga eexday Real Madrid kooxda ay cawadga isku yihiin ee Barcelona oo uu ku tilmaamay inay ka fiican tahay kooxdiisa.
Balse Raul Gonzalez ayaa sheegay inuu jecelyahay Real Madrid laakiin marka uu falanqeynayo kubadda uu yahay mid ka hadlaya wixii jira oo kaliya taasna ay tahay wax uusan ku mutaysanayn eed.
“Ma jiro qof shaki galin kara jacaylka aan u qabo Real, 17 sano ayaan u soo ciyaarayay, laakiin taasi waa ay ka duwantahay marka laga hadlayo kubadda cagta iyo falanqeynteeda” ayuu yiri Raul Gonzalez.
“Tusaale ahaan, waa sax inaan dhahno Barcelona qaab ciyaareed fiican ayeey soo bandhigtay sanadihii u danbeeyay, Barca miyaa ka fiican Real? lagayaabee inay ku jiraan qaab ka fiican Real dhanka horyaalka sanadihii u danbeeyay laakiin dhanka Champions League isku heer ayaan nahay waqtiyadii u danbeeyay”.
“Dadka dhan waxay i waydiinayaan waqtiga aan dib ugu soo laaban doono Real, waxaa haboon in dadku ay ogaadaan in Real Madrid ay tahay gurigayga, waana u soo laaban doonaa goor dhaw ama goor dheer”.
Hector Bellerin waa uu joogi karaa Arsenal, Barcelona uma baahna isaga! – Marca
Claudio Bravo oo ka hadlay wararka la xiriirinaya ka tagista Man City